Inona no hatao amin'ny offal | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra
К fako ampidiro ny aty, ny voa, ny lela, ny fo, ny havokavoka, ny ati-doha, ny vavony, ny vavony, ny fery, sns.
Mba hanatsarana ny tsiron'ny aty dia atsoboka anaty rano mangotraka mandritra ny 1 minitra alohan'ny handrahoana azy, avy eo hosasana amin'ny rano mangatsiaka ary maina.
Ahoana no fanomanana ny aty
Ny tsiron'ny aty koa dia mihatsara raha alona amin'ny ronono mangatsiaka mandritra ny 2 ora alohan'ny handrahoana azy na amin'ny endriny inona na amin'ny inona na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana tokony hanaovana sakafo be loatra na fahandroana be loatra ity vokatra ity.
Amin'ity tranga ity dia manjary henjana sy tsy misy tsirony izy io. Aty, nendasina tsy nasiana masira tsara.
Fomba fahandro amina
Ampangotrahina amin'ny rano be ny voa. Io dia ahafahanao mamoaka akora misy fofona manitra avy amin'izy ireo. Ny voa hen'omby sy henan-kisoa dia voakapa amin'ny lafiny iray, atsoboka amin'ny rano mangatsiaka hatramin'ny 3 ora, avy eo alemana anaty rano vaovao, ampangotrahina, araraka, avy eo andrahoina mandritra ny 1-1 ora, avy eo hosasana amin'ny rano mangatsiaka . Ny voan'omby dia endasina amin'ny hafanana be, aorian'ny nandrahoina azy ireo.
Ny voan'ny veal sy zanak'ondry dia tsy mila alemana. Ny kibony vita dia tsy tokony hanana loko mena amin'ny tapaka. Tehirizo amin'ny toerana mangatsiaka ao anaty fitoeran-drano voaisy tombo-kase izy ireo, esory ny ron-kena.
Atao anaty rano mangotraka ny lela, andrahoina amin'ny afo malefaka mandritry ny 3 ora ary avy eo afindra amin'ny rano mangatsiaka ary esorina avy hatrany ny hoditra. Tehirizo ao anaty kaontenera voahidy ny lela nandrahoina.
Alemana mandritra ny adiny 1 amin'ny rano mangatsiaka aloha ny ati-doha ary, tsy esorina aminy, dia saraho ilay horonantsary. Ho an'ny fandrahoana sakafo, ny ati-doha dia apetraka amin'ny laharana iray, araraka amin'ny rano mangatsiaka, ampiana isaky ny vokatra 1 kg, 30 g misy vahaolana vinaingitra 3%, sira 10 g, dipoà 0 g! ary ravina helo-drano 6 g.
Ampangotrahina ao anaty fitoeran-tombo-kase misy vay ambany ny ati-doha. Alohan'ny handrahoana lalina azy dia ampangotrahina mandra-pitoviana ny ati-doha, avy eo ampangatsiahina, maina ary atao lafarinina sy atody.
Alohan'ny handrahoana azy dia alemana anaty rano mangatsiaka mandritra ny adiny 2 ny fo. To! esory ny tsiro marikivin'ny tavy, tapatapaho, atobohy mandritra ny adiny 5 amin'ny rano mangatsiaka, ovay in-2 ny rano. Ampangotrahina mandritra ny adiny 3 ny bà ao anaty kaontenera misy sarony mihidy. Araraka amin'ny rano mangatsiaka ny tongotr'ady ary mahandroa mandritra ny 3-3, 5 ora amin'ny vay kely.
Asiana sira; amin'ny faran'ny fandrahoan-tsakafo. Tehirizo anaty rano masira na ron-kena mangatsiaka izy ireo. Ny holatra dia alemana anaty rano mangatsiaka mandritra ny 6 ora, manova ny rano isaky ny 2 ora, avy eo andrahoina amin'ny vony ambany mandritry ny ora 5. Ny vokatra vita dia tahirizina amin'ny toerana mangatsiaka, esorina amin'ny ron-kena.
Lela tapa-mofo: ao anaty lafaoro misy ovy
Voa voa mamono? Dingana dingana miaraka amin'ny sary
Voan'ny kisoa - fomba fahandro
Resipeo - Aty namboarina miaraka amin'ny paoma sy tongolo
Prev Cocktail miaraka amin'ny jirofo
Manaraka Fotoana firy handaniana eo anelanelan'ny fanazaran-tena
82 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,748.